Ilo-muhiim ah: Sweden oo Codsaneysa Xubinimada NATO Isniinta soo Socta
HomeWararka CaalamkaIlo-muhiim ah: Sweden oo Codsaneysa Xubinimada NATO Isniinta soo Socta
May 13, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Wargeyska Expressen oo soo xiganaya ilo-wareedyo aan la magacaabin ayaa sheegay in Sweden ay soo gudbin doonto codsiga ku biirista Ururka NATO isla marka uu dhaco kulanka aan caadiga ahayn ee dowladda Isniinta soo socota.
Maalinta Axada ayaa la filayaa in xisbiga Socialdemokraterna uu ku dhawaaqo mawqifkiisa u dambeeya. Sida laga soo xigtay Expressen, go’aanka taariikhiga ah ee codsiga NATO ayaa la gaari doonaa inta lagu guda jiro shirka aan caadiga ahayn ee dawladda ee Isniinta.
Isla markii uu kulanka ka dib, Sweden waxay soo gudbin doontaa codsigeeda xubinnimada, haddii aysan dhicin wax lama filaan ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyada.
Madaxweynaha Finland, Sauli Niinisto iyo Ra’iisul Wasaare Sanna Marin ayaa maanta ku dhawaaqay inay taageerayaan ka mid noqoshada Finland ee NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Anne Linde ayaa sheegtay in go’aanka Finland uu aad muhiim ugu yahay Sweden